Star Wars 2.5.1.390 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 2.5.1.390 လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်က
Application များ ဖျော်ဖြေရေး Star Wars
Star Wars ၏ ဖော်ပြချက်
To download and access some high resolution features and content, this app requires allocating some large media files to external storage on your device. This app also requires permission to access your camera for photo and augmented reality features. This app uses location services to give weather updates.</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>
Star Wars အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Star Wars အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Star Wars အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
apps စတိုး 2.68M 3070.8M
Star Wars နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း Star Wars အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 2.5.1.390
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ http://disneyprivacycenter.com
App Name: Star Wars
File Size: 147.01MB
Release date: 2018-02-07 10:01:48
အထောကျအပံ့ပေးနိုငျသော စီပီယူ: x86, armeabi-v7a, mips
လကျမှတျ SHA1: DA:43:0B:C4:BE:3D:D2:89:89:BE:69:88:BC:49:18:7C:87:3B:86:A6
ထုတျလုပျသူ (CN): starwars2015
အဖှဲ့အစညျး (O): twdc
Star Wars APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ